Mgbanwe ihu igwe na-ebute esemokwu mmadụ: Ndị nchọpụta kwuru na ime ihe ike nwere ike okpukpu abụọ n'afọ 2050 - Ụwa 2022
Mgbanwe ihu igwe na-ebute esemokwu mmadụ: Ndị nchọpụta kwuru na ime ihe ike nwere ike okpukpu abụọ n'afọ 2050
Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum California, Berkeley nyochara ọmụmụ 60 gbasara mgbanwe ihu igwe, n'ikpeazụ kwubiri na ka ọ na-erule 2050, esemokwu ụmụ mmadụ nwere ike ịrị elu pasent 50 n'ihi okpomọkụ na-eto eto. Ọmụmụ ihe ahụ kpuchiri ụdị ime ihe ike niile ma kpughee mgbanwe dị ukwuu na nke doro anya na omume mmadụ na nzaghachi na ihu igwe.
"Ọ na-agbanwe otú anyị si eche echiche banyere uru dị n'izere mgbanwe ihu igwe," ka onye nduzi ọmụmụ bụ Solomon Hsiang kwuru. "Ọ na-eme ka anyị chee na izere mgbanwe ihu igwe bụ n'ezie ihe anyị kwesịrị ịdị njikere itinyekwu ego na ya."
Hsiang na ndị ọrụ ibe ya lere anya n'omume mmadụ n'ihe gbasara ihu igwe n'ime afọ 12,000 gara aga iji chọta njikọ n'etiti ihu igwe na-ekpo ọkụ na iwe ọkụ, nke ha mere. Esemokwu intergroup bilitere pasenti 14 na ime ihe ike n'etiti mmadụ bilitere pasentị anọ maka mmụba okpomọkụ ọ bụla. E bipụtara meta-analysis na akwụkwọ akụkọ sayensị, na pasent 78 nke data dị mkpa sitere na 2009 na mgbe e mesịrị.
Dị ka United States Environmental Protection Agency (EPA) si kwuo, n'ime narị afọ gara aga, nkezi okpomọkụ ụwa agbagoro site na 1.4°F. Ọ bụ ezie na nke a dị ka nkeji na nlele mbụ, obere mgbanwe okpomọkụ na-atụgharị gaa na mgbanwe mgbanwe dị ukwuu na nke nwere ike ịdị ize ndụ na ihu igwe, nke ndị nchọpụta kpugheere ugbu a na-emepụtakwa gburugburu ebe obibi.
Ihe omume ụmụ mmadụ, dị ka ịtọhapụ nnukwu carbon dioxide na ikuku ndị ọzọ na-ekpo ọkụ na-abanye n'ime ikuku site na ọkụ ọkụ ọkụ maka ume, na-ekere òkè dị mkpa na mgbanwe ihu igwe. Igwe ikuku ndị a na-ejide ike okpomọkụ na ikuku ma mee ka ọ kpoo ọkụ, n'ikpeazụ na-abawanye nkezi okpomọkụ nke ụwa.
Ndị nchọpụta ahụ chọrọ ijide n'aka na nchọpụta ha ziri ezi na nke ọma dị ka o kwere mee, na iji mee nke a, ha nyochara ihe ọmụmụ sitere na mpaghara dịgasị iche iche gụnyere climatology, nkà mmụta ihe ochie, akụnụba, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na nkà mmụta uche.
A na-enyocha akụkụ dị iche iche nke ihu igwe, dị ka mmiri ozuzo, ụkọ mmiri ozuzo, na okpomọkụ, niile ma jiri ụdị dị iche iche na ogo nke ime ihe ike n'ụdị sara mbara. E kewara ihe ndị a n'ime otu ndị a nwere njikọ dị iche iche maka ihe omume akụkọ ihe mere eme: ime ihe ike onwe onye na mpụ dị ka igbu ọchụ, mwakpo, idina mmadụ n'ike, na ime ihe ike n'ụlọ; ime ihe ike n'etiti otu na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka agha obodo, ọgbaghara, ime ihe ike agbụrụ, na mbuso agha nke ala; na ndakpọ nkuzi dịka mgbanwe mberede na nnukwu mgbanwe na ụlọ ọrụ na-achị ma ọ bụ ọdịda nke mmepeanya dum.
Emere ọmụmụ ihe ahụ n'ime ụlọ nyocha ma n'ọnọdụ mmadụ kwa ụbọchị, na-achọpụta mmụba dị elu dị ka pasent 16 n'ihe ọ bụla na-emegide site n'ịkpọ mpi ruo ime ihe ike n'ụlọ, mwakpo, ndina n'ike, na igbu ọchụ n'oge oge ihu igwe na-ekpo ọkụ. N'ezie, n'ime ọha mmadụ 27 nke oge a ọmụmụ, onye ọ bụla gosipụtara mmekọrịta dị n'etiti okpomọkụ dị elu na ime ihe ike. N'ezie, ịrị elu okpomọkụ dị naanị 2 Celsius, nwere ike ịbawanye esemokwu n'etiti otu, dị ka agha obodo, site na pasent 50.
Olee otú ndị ọkà mmụta sayensị si chọpụta na okpomọkụ na-eme ka anyị na-ewekarị iwe karị, karịsịa n'ọmụmụ ihe e mere? N'ime otu n'ime nnyocha e nyochara, ndị nchọpụta kpachapụrụ anya bute okporo ụzọ na oke okpomọkụ n'otu ụzọ ụgbọ mmiri dị na Phoenix iji hụ ma ndị ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị ntụ oyi ga-eji iwe na-akụ ụda karịa ndị na-anya ụgbọ ala na-achịkwa ihu igwe. Nsonaazụ gosiri na, n'ezie, ndị ahụ na-ekpo ọkụ na-akawanye mma.
Craig A. Anderson, bụ́ prọfesọ nkà mmụta akparamàgwà mmadụ na Mahadum Iowa steeti bụ́ onye na-amụ ime ihe ike ma o tinyeghị aka n'ihe ọmụmụ ahụ kwuru, sị: “E nwere nnukwu ihe àmà na-egosi na mgbe ahụ́ na-adị ndị mmadụ ọkụ, ha na-adịkwu ọkụ n'obi. "Ha na-akọwakarị obere iwe iwe dị ka mkpasu iwe dị njọ na nke ebum n'obi karịa ka ha ga-anọ na okpomọkụ dị mma."
Edwart Miguel, onye na-ede akwụkwọ nyocha nke UC Berkeley dere, sị: "Anyị na-echekarị na ọha ọgbara ọhụrụ nwere onwe ha na gburugburu ebe obibi, n'ihi ọganihu nkà na ụzụ na-aga n'ihu." "Ma nchoputa anyị na-agbagha echiche ahụ."